I-HONGSBELT® ibhanti yokuhambisa iplastiki yemodyuli isetyenziswa kakhulu kwimveliso yemveliso yenyama eveliswe ukuthunyelwa ngaphandle. Yamkela amabhanti emodyuli e-HONGSBELT® kuyo yonke inkqubo yokuthutha. Iimveliso zechungechunge ze-HONGSBELT® zigqithise isatifikethi se-FDA. Uyilo lwayo olulula lwenza ibhanti yalula ukuyifaka, ukuqhaqha kunye nokucoca. Konke ukutya okunxibelelana nebhanti kuyakwazi ukufumana isiqinisekiso esikhulu sococeko lokhuseleko.
Ngokwesicelo esingqongqo kunye nokucoceka kokutya, zonke iimveliso ze-HONGSBELT® zinokongeza i-antibiotic eyongezelelweyo. Ngaphambi kokongeza i-antibiotic ubuninzi be-colon bacillus kunye negolide ye-staphylococcus kwi-HONGSBELT® PE impahla malunga namaxesha angama-0.125 aloo kwibhanti yokuhambisa i-PVC;
Emva kokongeza i-antibiotic, ngamaxesha angama-0.1 kuphela aloo nto kwizinto ze-PE ngaphandle kokongeza i-antibiotic, okubaluleke ngakumbi, umphumo uya kuhlala ixesha elide, kwaye awuyi kunyamalala ngenxa yexesha.
Iimveliso ze-HONGSBELT® zenziwe ngeplastiki enye, kwaye ineempawu zokudibanisa lula. Nokuba idibana nokuphazamiseka kwezinto okanye ukudibanisa ubunzima, akuyimfuneko ukuthatha i-detector yesinyithi ngaphandle, ngoko inokunciphisa iimpazamo zokuphahlazeka kunye nomngcipheko womonakalo kwinkqubo yokugcina nokucoca.
I-HONGSBELT® ibhanti yokuhambisa imodyuli ibona ubunzima obulula obuhambisa uyilo kunye netekhnoloji eyodwa. Zonke itekhnoloji ezifanelekileyo kunye nezicelo nceda uqhagamshelane nesebe lethu lobunjineli, i-HONGSBELT® iya kuba lolona khetho lwakho luthembekileyo.